Semalt: Fomba dimy hanakanana Spam Traffic amin'ny WordPress mampiasa Plugin
Ivan Konovalov, Semalt Mpitantana Success Manager, dia miteny fa Wordpress dia manana plugins maro be izay manampy amin'ny fisorohana na fanakanana ny informatika amin'ny habaka. Mampalahelo, ny spam referrer dia fomba mahomby hanatsarana ny laharan'ny tranonkala amin'ny valin'ny fikarohana. Ny hacker sy spammers dia mitazona hatrany ny fomba hampitomboana ny fifamoivoizana amin'ny tranokalany, ny fahitana ny môtô sy ny fahombiazan'ny orinasa. Noho izany dia mampiasa fomba fitsaboana hafa amin'ny fitsaboana izy ireo. Soa ihany fa manana vohikala WordPress isika izay manakana ny votoatin'ny tranonkala mandritra ny fotoana voafetra. Midika izany fa ny tranokala WordPress dia tsy mahazo fifamoivoizana sandoka ary ireo hackers dia tsy afaka hamoaka vola amin'ny rohy misy ny tranokala. Tsy afaka miditra amin'ny anaranao sy ny tenimiafinao ihany koa izy ireo, ary tsy afaka mamitaka ny kaonty Google Analytics anao.
Ahoana ny fanesorana rindrambaiko na tranonkala referrer amin'ny tranonkala WordPress?
Ao amin'ny Torolàlan'ny Plugins WordPress, maro ireo plugins azo ampiasaina hanakana ny fifamoivoizana spam. Ireo plug-in referenders rehetra ireo dia manana tahiry manokana, tarehin-javatra ary endri-javatra manokana. Manampy ny manakana anaro anaran-tsokajy ho marobe amin'ny isa marobe. Ny webmasters dia afaka manara-maso akaiky ireo tranonkala spam referans rehetra ary manatsara ny taham-pitenenany.
Fomba hanakanana fifamoivoizana momba ny spam na fifamoivoizana mifandraika amin'ny fampiasana plugins:
Dingana 1: Ampifanaraho amin'ny toetoetranao ny fitaovana:
Raha namorona tranonkala mampiasa WordPress ianao dia tokony handeha any amin'ny sehatry ny Admin ary hizaha ny faritra Plugin installé ho fanakanana ny spam referrer. Ataovy azo antoka fa nisafidy ny plugin izay manana laza tsara ianao ary efa nodinihin'ny olona marobe.
Dingana 2: Fametrahana sy fametahana:
Raha vao tafiditra ao amin'ny tranonkalanao WordPress ny plugin, dia tokony hizara azy amin'ny alàlan'ny fanovana -> Spam Referrer safidy ny safidy ary tsy manadino ny mametraka izany araka ny fangatahanao sy ny toetoetran'ny tranonkala.
Dingana 3: Atoroy ny plugin
Ao amin'ny tranonkalan'ny admin ao amin'ny tranokalanao Wordpress, dia hahita safidy sasantsasany ahafahana mampifanaraka ny plugins anao. Ireo safidy ireo dia ahafahanao manakana ireo IP an'ny spam, ary ny fitsidihan'izy ireo na ny hitsiny dia alefa mankany amin'ny adiresy manokana.
Dingana 4: Mamorona domains maoderina:
Ao amin'ny faritra Konfiguraire ny WordPress, ny plugin dia hanome ny safidy hananganana domains maoderina. Raha inoanao fa ny plugin dia tsy afaka manakana ny sariohatra ara-tsindrim-peo sy ny domicile diso, dia azonao ampidirina ny URL manually mba hiantohana ny fiarovana ny tranonkala. Azonao atao ny mahita ny lisitr'ireo toerana mampiahiahy ao amin'ny kaonty Google Analytics na forum forums.
Dingana 5: Lisitr'ireo rakitra spam eto:
Ao amin'ny faritra Fampidirana plugin, dia azonao jerena ny lisitr'ireo rakitra nomena ny anaran'ny spam ary afaka manakana azy ireo amin'ny fotoana rehetra, mamonjy fotoana maro. Ny lisitra vaovao dia azo alaina avy amin'ny Internet na ny servero. Raha te-hanampy sy hizara lisitra an-tserasera ianao dia tokony hamaky lisitra ireo sehatra rehetra ireo mba tsy hanohizan'izy ireo ny fitsidihanao hosoka avy amin'ny vondrom-piarahamonin'ny aterineto. Kitiho ny bokotra Upload Server ary tehirizo ny fikandran'ny plugin.
Inona no plugin mety aminao?
Ny Block Referrer Spam plugin no tsara indrindra sy iray amin'ireo karajia WordPress plugins. Azonao atao ny mametraka azy amin'ny alàlan'ny lahatahiry plugin amin'ny Wordpress ary ahafahanao mivezivezy avy hatrany. Ny safidy Auto Save na Auto Update dia manampy anao hanavao ny anaran-tranonkalan'ny spam automatique Source .